I-Ultrasonic lab homogenizers ingasetshenziselwa ukuqhutshwa kwe-batch kanye ne-inline uketshezi nama-slurries. Izicelo ezijwayelekile zifaka phakathi i-homogenization, ukuhlakazeka, i-emulsification, ukuncibilika kanye nokusabela kwe-sonochemical. Nge-sonication eqhubekayo emgqeni, amaseli wokugeleza nama-reactor e-inthanethi ngosayizi namajometri ahlukahlukene ayatholakala.
Icubungula i-Ultrasonic Inline ku-Lab Scale
Ama-flow cell reactors ama-homogenizers e-ultrasonic ayaziwa futhi asetshenziselwa kabanzi ukucubungula amanani amakhulu ekukhiqizeni kwezimboni. Kodwa-ke, ekucutshungulweni kwamavolumu amancane kulabhu nasezingeni eliphezulu ebhentshini ukusetshenziswa kwamaseli wokugeleza kwe-ultrasonic kunikeza izinzuzo ezahlukahlukene, futhi. Amaseli wokugeleza kwe-Ultrasonic avumela ukufeza imiphumela yokufaniswa kokulungiswa kusukela okokusebenza kudlula isikhala esivinjelwe segumbi lokugeleza kwamaseli ngendlela echaziwe. Izici ze-Sonication ezifana nesikhathi sokugcina, izinga lokushisa kwenqubo kanye nenani lamaphaseji angalawulwa ngokunembile ukuze izinhloso zitholakale ngokuthembekile.
Amaseli wokugeleza kwe-Hielscher nama-reactor asemgqeni eza namajakethi okupholisa wokugcina inqubo yokushisa efanelekile. Ama-flow cell reactors ayatholakala ngobukhulu obuhlukahlukene namajometri ukuze afeze izidingo ezithile zenqubo.
Ngokusebenzisa i-laboratory ultrasonicator ngokuhambisana ne-flow cell reactor, ungacubungula amanani wesampula amakhulu ngaphandle komsebenzi omningi womuntu siqu. Kusetshenziswa ukusethwa kweseli lokugeleza kwe-ultrasonic, uketshezi ludonswa kusikhungo se-ultrasonic esenziwe ngensimbi engenalutho noma ingilazi. Esitokisini sokugeleza, uketshezi noma i-slurry ivezwe ku-sonication eguquguqukayo. Yonke impahla idlula indawo evuthayo eshisayo ngaphansi kwe-sonotrode futhi ibhekane nokwelashwa kwe-ultrasonic. Ngemuva kokudlula endaweni ye-cavitation, uketshezi lufinyelela ekuphumeni kweseli lokugeleza. Ngokuya ngenqubo, ukwelashwa kokugeleza kwe-ultrasonic kungaqhutshwa njengokwelashwa okukodwa noma okuningi kokudlula. Ukuze kugcinwe ukushisa kwenqubo ethile ezuzisayo, isb. Ukuvimbela ukonakala kwento ezwela ukushisa ngesikhathi se-sonication, ama-flow cell reactors aboshwe ukuze kuthuthukiswe ukushabalalisa ukushisa.
Kusuka kumanani amancane kuya kwamakhulu: Imiphumela yenqubo ingakalwa ngokulinganayo kusuka kumanani amancane acutshungulwa elebhu nasebhentshini-phezulu kuya kokufakwayo okukhulu kakhulu esikalini sokukhiqiza kwezimboni. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher ayatholakala kunoma yimaphi amavolumu kusuka kuma-microlitres kuya kumalitha.
Amaseli wokugeleza kwe-Hielscher atholakala kalula futhi alungele ukusetshenziswa ngamakhemikhali amaningi.
Funda kabanzi mayelana ne- I-Lab futhi izimboni ze-homogenizers ze-ultrasonic!
Ultrasonic flow cell reactor ye-sonication e-inthanethi eqhubekayo yamanani amancane
Ultrasonic lab homogenizer UP200Ht nge cell flow for in-line sonication
Amadivayisi we-Ultrasonic Lab namaseli Okugeleza
Ngezansi, ungathola amadivayisi wethu we-ultrasonic lab anamaseli wokugeleza afanayo nama-sonotrode
I-UP400ST (24kHz, 400W):
I-sonotrodes S24d14D, S24d22D, ne-S24d22L2D iza nokufakwa uphawu kwe-O-ring futhi iyahambisana ne-flow cell FC22K (insimbi engagqwali, nejazi lokupholisa).
I-UP200St (26kHz, 200W) / I-UP200HT (26kHz, 200W):
I-sonotrodes S24d2D ne-S24d7D ifakwe uphawu lwe-O-ring futhi iyahambisana ne-flow cell FC7K (insimbi engagqwali, nejazi lokupholisa) ne-FC7GK (ingilazi yokugeleza kwengilazi, nejakhethi yokupholisa).
I-UP50H (30kHz, 50W) / I-UP100H (30kHz, 100W):
Kokubili i-UP50H ne-UP100H, kungasetshenziswa izinhlobo ezifanayo ze-sonotrode ne-flow cell. I-sonotrodes MS7 ne-MS7L2 ifaka uphawu olubenza balungele ukusetshenziswa namaseli wokugeleza i-D7K (insimbi engagqwali) ne-GD7K (ingilazi yokugeleza kwengilazi, nejacket yokupholisa).
Ungazisebenzisa Kanjani Izimo Zokusebenza Kumaseli Wokugeleza kwe-Ultrasonic
I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza okuhlukahlukene kwamaseli wokugeleza kwe-ultrasonic kanye nama-sonochemical reactors. Idizayini yokugeleza kwamaseli (okungukuthi, i-geometry nosayizi we-flow cell) ne-sonotrode kufanele kukhethwe ngokuya ngoketshezi noma i-slurry kanye nemiphumela yenqubo eqondisiwe.
Ithebula elingezansi libonisa imingcele ebaluleke kakhulu, ethonya izimo ze-ultrasound kuseli lokugeleza.
Ukushisa: Amaseli okugeleza anamajakethi apholile asiza ukugcina ukushisa kokucubungula okufunayo. Amazinga okushisa aphezulu eduze kwephuzu elithile elibilayo lomphumela woketshezi ekunciphiseni ukuqina kwe-cavitation kwazise ubukhulu bamanzi buyancipha.
Ukucindezela: Ingcindezi ipharamitha eqinisa i-cavitation. Ukucindezela ukugeleza kweseli kwe-ultrasonic kuphumela ekwandeni kobuningi bamanzi futhi ngaleyo ndlela kwandise i-acoustic cavitation. Amaseli we-Hielscher lab flow flow angacindezelwa kuze kufike ku-1 barg, ngenkathi ama-Hielscher industrial flow cell kanye nama-reactors aze afike ku-300atm (approx. 300 barg) angasetshenziswa.
I-viscosity ketshezi: I-viscosity ye-liquid yinto ebalulekile, uma kukhulunywa ngokusethwa kwe-inthanethi kwe-ultrasonic. Amaseli wokugeleza kwamalebhu amancane kungcono ukuthi asetshenziswe ngemidiya enesithunzi ephansi, ngenkathi amaseli wokugeleza kwezimboni waseHielscher elungele izinto zokwakheka eziphansi eziphakeme ezifaka namaphasishi.
Ukwakhiwa ketshezi: Imiphumela ye-viscosity ye-liquid ichazwe ngenhla. Uma uketshezi olucutshungulwayo lungaqukethe okuqinile, ukupompa nokondla kulula futhi izakhiwo zigeleza. Uma kukhulunywa ngama-slurries aqukethe okuqinile njengezinhlayiya nemicu, ukuma kweseli lokugeleza kufanele kukhethwe kucatshangelwa usayizi wezinhlayiyana noma ubude be-fiber. Ukugeleza kweseli kwejiyometri elungile kusiza ukugeleza koketshezi oluqinile-futhi kuqinisekisa ukufana okufana.
Amagesi ancibilikisiwe: Uketshezi olufakwa esitokisini sokugeleza se-ultrasonic akufanele luqukathe inani eliphakeme lamagesi ancibilikisiwe ngoba amabhamuza egesi aphazamisa ukwenziwa kwe-acoustic cavitation kanye namabhamuza alo wesici.
Flow cell reactor FC22K yelebhu ultrasonicator UP400St
Ama-reactors we-Ultrasonic flow ngezinga elincane nelikhulu athandwa kakhulu ocwaningweni, uR&D nezimboni njengoba zivumela ukutadisha nokulawula izindlela nemiphumela yokusebenza ngamandla kwe-ultrasonic ephezulu. Ngakho-ke, i-ultrasonic flow cell kanye ne-inline reactors sekuqalisiwe ukusetshenziswa kwezinhlelo ezahlukahlukene kuzinqubo zebhayoloji, ezemithi nezamakhemikhali – ku-laboratory, umshayeli wezindiza, kanye nesilinganiso sezimboni.
Ama-homogenizers ama-Hielscher Ultrasonics, ama-sonotrode namaseli wokugeleza ayatholakala ngemiklamo ehlukahlukene ukuze ahlanganise ukusethwa kokulungiswa okuhle kwe-ultrasonic. Abasebenzi bethu abanolwazi bazobonisana maqondana nokulungiselelwa kokusebenza okuhle kwemigomo yakho yenqubo!